Ny votoatin'ny fahasoavana - Church of the World of God Switzerland
lahatsoratra > Ny fahasoavan'Andriamanitra > Ny fototry ny fahasoavana
Indraindray aho mahare ahiahy fa apetrakay loatra ny fahasoavana. Amin'ny maha-mpanitsy azy azy dia voalaza fa, amin'ny maha-mpifaninana amin'ny fampianarana ny fahasoavana, azontsika atao ny mihevitra ny fankatoavana, ny fahamarinana ary ny andraikitra hafa voalaza ao amin'ny Soratra Masina, ary indrindra ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ireo izay manahy momba ny "fahasoavana be loatra" dia manana olana ara-dalàna. Mampalahelo fa misy ny mampianatra fa ny fomba fiainana iainana dia tsy ilaina raha toa ka voavonjy amin'ny fahasoavana isika fa tsy miasa. Ho azy ireo, ny fahasoavana dia zava-dehibe indrindra amin'ny tsy fahafantarana ireo fanoloran-tena, fitsipika, na ny firafitry ny fifandraisana azo antenaina. Ho azy ireo, ny fahasoavana dia midika fa ekena tokoa ny zava-drehetra, satria efa voavela izany aloha. Araka ny diso io fiheverana io, ny fahasoavana dia tapakila maimaim-poana - amin'ny herinaratra iray dia herin'ny mpisolovava banga vao afaka manao izay tianao.
Ny antinomisma dia endriky ny fiainana mampiely fiainana tsy misy lalàna na fitsipika. Io olana io no lohahevitry ny soratra masina sy ny toriteny nandritra ny tantaran'ny fiangonana. Dietrich Bonhoeffer, maritiora tao amin'ny fitondrana Nazi, dia niresaka tao amin'ny bokiny Succession momba ity resaka "fahasoavana mora" ity. Ny antinomisma dia resahina ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ao amin’ny valin-teniny, i Paoly dia niresaka momba ny fiampangana fa ny fanantitranterana ny fahasoavana dia namporisika ny olona “haharitra amin’ny ota, mba hitomboan’ny fahasoavana bebe kokoa” (Romana). 6,1). Fohy sy hentitra ny valin-tenin’ny apostoly: “Sanatria izany!” (V.2). Fehezanteny vitsivitsy taty aoriana dia namerina ny fiampangana azy izy ary namaly hoe: “Ahoana izao? Hanota va isika, satria tsy ambanin’ny lalàna, fa ambanin’ny fahasoavana? Sanatria izany!" (V.15).
Ny valin'ny apostoly Paoly momba ny fiampangana ny anti-anarana dia mazava. Na iza na iza hiady hevitra fa ny fahasoavana dia midika fa avela ny zava-drehetra satria voasaron'ny finoana fa diso. Fa nahoana? Inona no tsy nety tao? Moa ve ny olana tena "famindram-po be loatra"? Ary ny vahaolana ho azy ve dia ahitana ny fanitarana ny fahasoavana?
Inona no tena olana?
Ny tena olana dia ny mino fa ny fahasoavana dia midika fa tafavoaka amin'ny fitsipika, baiko, na adidy Andriamanitra. Raha ny fahasoavana tokoa no nanondro ny fametrahana fitsipika an-tsoratra, eny, miaraka amin'ny fahasoavana be dia be ny manilika. Ary raha voalaza isika fa mamindra fo amin'Andriamanitra, dia afaka manantena azy hanafaka amin'ny andraikitra rehetra na asa tokony hataontsika isika. Ny fahasoavana bebe kokoa hatrany amin'ny fankatoavana. Ary ny kely famindram-po, ny fanaingoana kely, fifanarahana kely tsara.
Ny tetika toy izany angamba no mamaritra tsara indrindra izay azon'ny fahasoavan'olombelona azo atao tsara indrindra. Saingy tsy hadino isika fa io fomba io dia mandrefy fahasoavana amin'ny fankatoavana. Mametraka ny roa tonta hifanandrina izy, ary mitohy hatrany ny ady miverina tsy miato fa tsy miato intsony, satria samy mifamono ny roa tonta. Samy manao tsinontsinona ny fahombiazan'ny tsirairay avy. Soa ihany, ny tetika toy izany dia tsy taratry ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahamarinana momba ny fahasoavana no manafaka antsika amin'ity fanahian-diso ity.
Ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny olona manokana
Ahoana no amaritan’ny Baiboly ny fahasoavana? “I Jesoa Kristy mihitsy no mijoro ho an’ny fahasoavan’Andriamanitra amintsika”. Ny tsodranon’i Paoly tamin’ny faran’ny 2. Antsoin’ny Korintiana hoe “ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika”. Omen’Andriamanitra antsika maimaim-poana ny fahasoavana amin’ny endriky ny Zanany tonga nofo, izay mampita ny fitiavan’Andriamanitra antsika sy mampihavana antsika amin’ny Tsitoha. Ny zavatra nataon’i Jesoa ho antsika dia manambara amintsika ny toetra sy ny toetran’ny Ray sy ny Fanahy Masina. Asehon’ny Soratra Masina amintsika fa i Jesoa no mariky ny maha-Andriamanitra mahatoky (Hebreo 1,3 Baiboly Elberfeld). Izao no voalaza ao: “Izy no endrik’Andriamanitra tsy hita”, ary “sitrak’Andriamanitra ny hitoeran’ny be rehetra ao aminy.” ( Kolosiana. 1,15; 19). Izay mahita Azy dia mahita ny Ray; ary rehefa mahalala Azy isika, dia mahalala ny Ray koa4,9; 7).
Nanazava i Jesosy fa “izay hitany ataon’ny Ray ihany no ataony.” (Jaona 5,19). Ampahafantaro antsika fa Izy irery ihany no mahalala ny Ray ary Izy irery ihany no manambara Azy (Mat 11,27). Milaza amintsika i Jaona fa io Tenin’Andriamanitra io, izay niara-nitoetra tamin’Andriamanitra hatrany am-boalohany, dia naka endriky ny olombelona ary “naneho antsika voninahitra tamin’ny maha-Zanak-lahy Tokan’ny Ray”, feno fahasoavana sy fahamarinana. Raha “nomena tamin’ny alalan’i Mosesy ny lalàna; [dia] fahasoavana sy fahamarinana [...] amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Eny tokoa, “tamin’ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra fahasoavana anampy fahasoavana”. Ary ny Zanany, izay nitoetra tao am-pon’Andriamanitra hatramin’ny taloha indrindra, dia “nanambara Azy tamintsika” (Jaona. 1,14- iray).
Jesosy dia maneho ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika - ary manambara amin'ny teny sy ny asa fa Andriamanitra mihitsy no feno fahasoavana. Izy mihitsy no fahasoavana. Omeny antsika avy amin’ny maha-izy azy izany – ilay ihaonantsika ao amin’i Jesosy. Tsy manome antsika fanomezana noho ny fiankinan-doha amintsika izy, na noho ny adidy amin’ny fanomezana tombontsoa antsika. Noho ny toetrany malala-tanana, Andriamanitra dia manome fahasoavana, izany hoe manome izany ho antsika ao amin’i Jesosy Kristy araka ny sitrapony. Antsoin’i Paoly hoe fanomezana lehibe avy amin’Andriamanitra ny fahasoavana ao amin’ny taratasiny ho an’ny Romana (5,15- enina ambin'ny folo; 6,23). Hoy izy ao amin’ny taratasiny ho an’ny Efesiana: “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra, fa tsy avy amin’ny asa, mba tsy hisy hirehareha.”2,8- iray).
Izay rehetra omen’Andriamanitra antsika dia omeny antsika amim-pahalalahan-tanana avy amin’ny fahatsarana, avy amin’ny faniriana lalina hanao soa amin’ny olona rehetra izay kely sy tsy mitovy. Ny asa soa nataony dia avy amin'ny toetrany feno fiantrana sy malala-tanana. Tsy mitsahatra ny mamela antsika handray ny hatsaram-pony amin’ny sitrapony manokana, na dia tojo fanoherana sy fikomiana ary tsy fankatoavana avy amin’ny zavaboariny aza izany. Mamaly ny ota amin’ny alalan’ny famelan-keloka sy ny fampihavanana araka ny sitrapontsika amin’ny alalan’ny sorompanavotan’ny Zanany Izy. Andriamanitra, Izay mazava sady tsy misy maizina, dia manolotra ny tenany ho antsika ao amin’ny Zanany amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, mba hanomezany antsika fiainana amin’ny fahafenoany rehetra (1 Jaona . 1,5; John 10,10).
Fa hoy hatrany Andriamanitra:
Indrisy anefa fa voalaza matetika fa nampanantena Andriamanitra tany am-boalohany (eny fa na dia talohan’ny nahalavoan’ny olombelona aza) fa tsy hanome afa-tsy ny hatsaram-panahiny (Adama sy Eva ary Israely tatỳ aoriana) izy raha mahafeno fepetra sasany sy manatanteraka ny adidy apetrany amin’izany ny zavaboariny. Raha tsy nanao izany izy dia tsy ho tsara fanahy aminy koa. Koa tsy hanome azy famelan-keloka sy fiainana mandrakizay izy.
Araka io fomba fijery diso io, Andriamanitra dia ao anatin'ny fifanekena "raha ... dia ..." fifandraisana amin'ny zavaboariny. Io fifanekena io avy eo dia misy fepetra na adidy (fitsipika na lalàna) izay tsy maintsy ankatoavin’ny olombelona mba hahazoana izay atolotr’Andriamanitra azy ireo. Araka io fomba fijery io, ny zava-dehibe indrindra ho an’ny Tsitoha dia ny fankatoavana ny fitsipika napetrany. Raha tsy manao ny rariny amin’izany isika, dia tsy hanao ny tsara indrindra amintsika izy. Ary ny ratsy kokoa aza dia homeny antsika izay tsy tsara, dia izay tsy ho amin’ny fiainana, fa ho amin’ny fahafatesana; ankehitriny sy mandrakizay.
Io fomba fijery diso io dia mihevitra ny lalàna ho toetra manandanja indrindra amin'ny toetran'Andriamanitra ary koa lafiny lehibe indrindra amin'ny fifandraisany amin'ny zavaboariny. Io andriamanitra io dia andriamanitra fifanarahana izay manana fifandraisana amin'ny zavaboariny mifototra amin'ny lalàna sy ny fepetra. Izy no mitarika io fifandraisana io araky ny fotokevitra "tompo sy andevo". Araka io fiheverana io, ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra, mikasika ny hatsaram-panahiny sy ny fitahiany, anisan'izany ny famelana heloka, dia lavitra ny votoatin'ny endrik'Andriamanitra izay aparitany.
Raha ny marina, Andriamanitra dia tsy mijoro ho amin'ny sitrapo madio na amin'ny ara-dalàna madio. Miharihary izany indrindra rehefa mijery an'i Jesosy izay mampiseho amintsika ny Ray sy mandefa ny Fanahy Masina isika. Miharihary izany rehefa maheno an'i Jesosy momba ny fifandraisany mandrakizay amin'ny Rainy sy ny Fanahy Masina isika. Avelany hahafantatra isika fa ny toetrany sy ny toetrany dia mitovy amin'ny an'ny rainy. Ny fifandraisan'ny ray-zanakalahy dia tsy noforonina amin'ny fitsipika, adidy na fanatanterahana ireo fepetra hahatratrarana ny tombontsoa amin'ity fomba ity. Tsy eo amin'ny fifandraisan'ny tsirairay ny ray sy ny zanakalahy. Tsy nahavita fifanarahana fifanarahana iray izy ireo, izay hifanarahana amin'ny tsy fanatanterahana ny lafiny iray. Ny fiheverana ny fifanarahana momba ny fifanarahana ara-dalàna eo amin'ny ray sy ny zanakalahy dia tsy mampino. Ny marina, araka ny nampahafantarin'i Jesosy antsika dia ny fifandraisan'izy ireo dia maneho ny fitiavana masina, ny fahatokisana ary ny fandavan-tena ary ny fanoloran-tena. Ny vavak'i Jesosy, rehefa mamaky izany ao amin'ny toko faha-17 ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona, dia manambara mazava fa io fifandraisan'ny triatra io no fototry ny asan'Andriamanitra amin'ny fifandraisana rehetra; satria manao araka ny asany foana izy satria tsy mivadika amin'ny tenany.
Rehefa mandinika tsara ny Soratra Masina dia hita mazava fa ny fifandraisan’Andriamanitra amin’ny zavaboariny, na dia taorian’ny nianjeran’ny olombelona tamin’ny Isiraely aza, dia tsy fifanarahana: Tsy miorina amin’ny fepetra tsy maintsy tandremana. Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny Isiraely dia tsy mifototra amin'ny lalàna, fa tsy fifanarahana raha-dia. Fantatr’i Paoly koa izany. Nanomboka tamin’ny fanekena, fampanantenana, ny fifandraisan’ny Tsitoha tamin’ny Isiraely. Ny Lalàn’i Mosesy (ny Torah) dia nanan-kery 430 taona taorian’ny nanorenana ny fanekena. Raha jerena ny fandaharam-potoana, dia zara raha noheverina ho fototry ny fifandraisan’Andriamanitra tamin’ny Isiraely ny lalàna.
Teo ambanin’ny fanekena, dia niaiky an-kalalahana tamin’ny Isiraely tamin’ny fahatsarany rehetra Andriamanitra. Ary, raha tsiahivina, dia tsy nisy ifandraisany tamin’izay azon’ny Isiraely natolotr’Andriamanitra mihitsy izany (5. Mo 7,6-8e). Aoka tsy hohadinointsika fa tsy nahalala an’Andriamanitra i Abrahama rehefa nampanantena azy ny hitahy azy sy hanao azy ho fitahiana ho an’ny firenena rehetra (1. Mosesy 12,2-3). Ny fanekempihavanana dia teny fikasana: voafidy malalaka ary omena koa. “Handray anareo ho amin’ny oloko Aho, ka ho Andriamanitrareo”, hoy ny Tsitoha tamin’i Israely.2. Mo 6,7). Nifanohitra tamin’izany ny voadin’Andriamanitra ny amin’ny fitahiany, fa avy amin’ny anilany ihany izany. Niditra tao amin’ny fanekempihavanana izy ho fanehoana ny toetrany, ny toetrany ary ny maha-izy azy. Fanehoam-pahasoavana - eny, fahasoavana!
Ny fandinihana akaiky ny toko voalohany amin'ny Genesisy dia manambara fa tsy diso amin'ny fahariana azy Andriamanitra araka ny karazana fifanarahana iray. Voalohany indrindra, ny famoronana ny tenany dia fihetsika an-tsitrapo. Tsy nisy na inona na inona nahazo ny zo hiaina, kely lavitra noho ny fisiany tsara. Andriamanitra mihitsy no manazava hoe: «Ary tsara», eny, «tsara». Avelan'Andriamanitra hahazoany tombony malalaka amin'ny zavatra noforoniny ny hatsarany, izay ambany lavitra noho izy; izy no manome ny ainy. Eva dia nanome ny hatsaram-panahin'Andriamanitra tamin'i Adama ka tsy ho irery izy. Ary toy izany koa, ny Tsitoha dia nanome an'i Adama sy Eva ny zaridainan'i Edena, ary nanao asa mahasoa izy io amin'ny fikarakarana azy amin'ny fomba ka manjary mahavokatra sy mandatsaka fiainana be dia be. Adama sy Eva dia tsy nifanaraka tamin'ny fepetra rehetra talohan'ny nanolorana azy ireo maimaimpoana ireo fanomezana tsara ireo.
Fa nanao ahoana izany taorian'ilay Fahalavoana raha tonga ny fahatezerana? Hita hoe manohy manao zavatra an-tsitrapo sy tsy misy fepetra Andriamanitra. Moa ve ny fangatahany hanome an'i Adama sy Eva ny mety hibebaka taorian'ny fihetsika tsy fankatoavany dia fihetsika fahasoavana? Diniho koa ny fomba nanoloran'Andriamanitra volo ho fitafiana. Na ny fandroahana azy avy tany amin'ny saha Edena aza dia fihetsika fahasoavana izay natao hanakana azy tsy hampiasa ny hazon'aina amin'ny fahotany. Ny fiarovana sy ny fanomezan'Andriamanitra an'i Kaina dia tsy azo jerena afa-tsy amin'ny lafiny iray ihany. Hitantsika ihany koa ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny fiarovana nomeny an’i Noa sy ny fianakaviany, ary ao anaty toky amin'ny fisafoana ny avana. Ireo fanomezam-pahasoavana rehetra ireo dia omena an-tsitrapo ho mariky ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsy misy amin'izy ireo ny karama amin'ny fanatanterahana na inona na inona karazana andraikitra, na dia kely ary ara-dalàna aza.
Fahasoavana ho fahasoavana tsy mendrika?
Avelan'Andriamanitra foana hizara malalaka amin'ny hatsaram-panahiny ny zavatra noforoniny. Ataony mandrakizay amin'ny alàlan'ny maha-Ray Azy, Zanaka ary Fanahy Masina azy. Ny zavatra rehetra ataon'ity Trinite ity dia hita amin'ny zavaboary dia avy amin'ny habetsahan'ny fiarahamoniny anatiny. Ny fifandraisana ara-dalàna sy ara-dalàna miaraka amin'Andriamanitra dia tsy hanome voninahitra ny mpamorona sy ny mpamorona ny fanekena, fa hahatonga azy ho sampy madio. Ny iditra dia miditra amin'ny fifandraisana fifanarahana miaraka amin'ireo manome fahafaham-po ny hanoanana ho fankatoavana satria ilain'ny mpanara-dia azy araka izay ilainy azy. Samy mifampiankina ny roa tonta. Izany no antony ifandraisan'ny tsirairay amin'izy ireo hanatratra ny tanjon'izy ireo. Ny voam-pahamarinana voajanahary ao anatin'ny filazana fa ny fahasoavana dia fahasoavana tsy manam-paharoa avy amin'Andriamanitra dia tsy mila izany intsony isika.
Ny hatsaram-pon'Andriamanitra dia mandresy ny ratsy
Ny fahasoavana dia tsy milalao afa-tsy amin'ny resaka ota fa tsy manadino na amin'ny lalàna na andraikitra. Tsara fanahy Andriamanitra na manao ahoana na manao ahoana ny ota. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy ilaina ny maneho fahasoavana maneho fahasoavana. Fa kosa, maharitra hatrany ny fahasoavany na dia misy ny ota aza. Marina fa tsy mijanona tsy manome an-kalalahana ny hatsarany amin'ny zavatra noforoniny Andriamanitra, na dia tsy mendrika izany aza. Avy eo dia navelany an-tsitrapo ilay volany tamin'ny vidin'ny sorom-pihavanana nataony.
Na dia manota aza isika, dia tsy mivadika Andriamanitra satria tsy afaka mandà ny tenany, araka ny nolazain’i Paoly hoe: “[...] raha mivadika isika, dia tsy mivadika ihany Izy.” (2. Timoty 2,13). Koa satria tsy mivadika amin’ny tenany mandrakariva Andriamanitra, dia mampiseho amintsika koa ny fitiavany sy mihazona mafy ny drafitra masina nataony ho antsika, na dia manohitra izany aza isika. Io faharetan’ny fahasoavana nomena antsika io dia mampiseho ny maha-zava-dehibe an’Andriamanitra amin’ny fanaovana soa amin’ny zavaboariny. “Fa Kristy maty hamonjy antsika, na dia fony mbola malemy aza isika, [...] fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota” (Romana). 5,6;8 ny). Ny toetra manokan’ny fahasoavana dia azo tsapaina mazava kokoa eo amin’ny toerana manazava ny haizina. Ary noho izany dia miresaka fahasoavana amin'ny ankapobeny isika ao anatin'ny tontolon'ny fahotana.
Tsara fanahy Andriamanitra na inona na inona fahotantsika. Manaporofo fa tsy mivadika amin'ny zavatra noforoniny Izy ary mitazona ny hoaviny tsara ho azy. Azontsika fantatsika tanteraka izany avy amin'i Jesosy, izay, amin'ny famitana ny Sorompanavotany, dia tsy azo esorina amin'ny hery rehetra miakatra manohitra azy. Ny herin'ny ratsy dia tsy afaka manakana azy tsy hanome ny ainy ho antsika ka ho velona. Na ny fanaintainana, na ny fijaliana, na ny fanetren-tena mafy indrindra dia afaka manakana azy tsy hanaraka ny toerany masina sy mifototra amin'ny fitiavana ary mampihavana ny olona amin'Andriamanitra. Ny hatsaram-pon'Andriamanitra dia tsy mitaky ny hanodinana ny ratsy ho amin'ny tsara. Saingy raha ny ratsy no jerena, tsara ho an'ny tsara ny tsara ka mila atao: zava-dehibe ny mandresy sy resy ary resy. Ka tsy be loatra ny famindram-po.
Fahasoavana: lalàna sy fankatoavana?
Ahoana no fiheverantsika ny lalàn’ny Testamenta Taloha sy ny fankatoavana kristiana ao amin’ny Fanekem-pihavanana Vaovao momba ny fahasoavana? Raha dinihina indray fa teny fikasana mitokana ny fifanekena nataon’Andriamanitra, dia saika hita miharihary ny valiny. Na izany aza, ny fitazonana ny fampanantenana dia tsy miankina amin'izany fihetsika izany. Tsy misy afa-tsy safidy roa amin’io toe-javatra io: ny mino ny teny fikasana feno fahatokiana an’Andriamanitra na tsia. Ny lalàn'i Mosesy (ny Torah) dia nilaza mazava tamin'ny Isiraely ny dikan'ny hoe mitoky amin'ny faneken'Andriamanitra amin'izao dingana izao alohan'ny fahatanterahan'ny fampanantenana nataony (izany hoe talohan'ny fisehoan'i Jesosy Kristy). Isiraely Tsitoha, tamin’ny fahasoavany, dia nanambara ny lalan’ny fiainana ao anatin’ny fanekeny (ny fanekena taloha).
Ny Torah dia nomen’Andriamanitra ho fanomezana maimaimpoana ho an’ny Isiraely. Tokony hanampy azy ireo izy. Antsoin’i Paoly hoe “mpampianatra” izy (Galatiana 3,24-25; Baiboly vahoaka). Noho izany dia tokony hoheverina ho fanomezana feno fahasoavana avy amin’ny Isiraely Tsitoha izany. Ny lalàna dia natao tao anatin’ny rafitry ny fanekena taloha, izay tamin’ny dingana nampanantenaina (miandry ny fahatanterahany amin’ny endrik’i Kristy ao amin’ny fanekena vaovao) dia fanekena ny fahasoavana. Natao hanompoana ny fanekem-pihavanana amin’ny sitrapon’Andriamanitra malalaka mba hitahiana an’i Israely sy hahatonga azy ho mpisava lalana amin’ny fahasoavana ho an’ny vahoaka rehetra.
Andriamanitra, izay mitoetra ho marina amin’ny tenany, dia maniry ny hanana fifandraisana tsy mifanaraka amin’ny fifanarahana amin’ny olona ao amin’ny Fanekena Vaovao, izay nahita ny fahatanterahan’izany tao amin’i Jesosy Kristy. Omeny antsika ny fitahiana rehetra amin’ny sorompanavotany sy ny fampihavanana ny fiainana, ny fahafatesana, ny fitsanganany amin’ny maty ary ny fiakarany any an-danitra. Atolotra antsika ny tombontsoa rehetra amin’ny fanjakany ho avy. Fanampin'izany, atolotra antsika ny vintana tsara izay itoeran'ny Fanahy Masina ao anatintsika. Fa ny fanolorana ireo fahasoavana ireo ao amin’ny Fanekem-pihavanana Vaovao dia mangataka fanehoan-kevitra – ilay fihetsika tokony ho nasehon’i Israely ihany koa: Finoana (fitokisana). Ao anatin’ny fifanekena vaovao anefa, dia matoky ny fahatanterahany isika fa tsy ny fampanantenany.
Ny fihetsiktsika momba ny hatsaran'Andriamanitra?
Tokony hanao ahoana ny fandraisantsika ny fahasoavana naseho antsika? Ny valiny dia: "Fiainana matoky ny teny fikasana". Izany no atao hoe “miaina amin’ny finoana”. Mahita ohatra momba ny fomba fiaina toy izany isika ao amin’ny “olo-masina” ao amin’ny Testamenta Taloha ( Heb. 11 ). Misy ny vokany raha tsy miaina amim-pahatokiana ny fanekempihavanana nampanantenaina na tanteraka. Ny tsy fahampian'ny fitokisana amin'ny fanekena sy ny mpanoratra azy dia manakana antsika amin'ny fanararaotana azy. Ny tsy fitokisan’ny Israely dia nahatonga azy tsy hahazo ny loharanon’aina - ny sakafony sy ny fahasambarany ary ny fahavokarany. Nisakana ny fifandraisany tamin’Andriamanitra ny tsy fahatokisana ka saika tsy nandraisany anjara tamin’ny fahasoavan’ny Tsitoha rehetra.
Tsy azo ovana ny fanekena nataon’Andriamanitra, raha ny fanazavan’i Paoly amintsika. Nahoana? Satria ny Tsitoha dia mitazona azy tsy an-kijanona ary miaro azy, na dia vidiny aza izy. Tsy hiala amin'ny Teniny mihitsy Andriamanitra; tsy afaka terena hanao zavatra tsy mendrika amin'ny famoronana izy na ny olony. Na dia tsy matoky ny fampanantenantsika aza isika, dia tsy afaka manao azy tsy hivadika amin'ny tenany. Izao no atao rehefa lazaina fa Andriamanitra dia miasa "noho ny anarany".
Ny toromarika sy ny didy rehetra mifandray aminy dia tokony hankatò antsika amin’ny finoana an’Andriamanitra, omena maimaim-poana ny hatsaram-panahy sy ny fahasoavana. Izany fahasoavana izany dia nahita ny fahatanterahany tamin’ny fanoloran-tena sy ny fanambaran’Andriamanitra ny tenany tao amin’i Jesosy. Mba hahazoana fahafinaretana amin'izy ireo dia ilaina ny manaiky ny fahasoavan'ny Tsitoha ary tsy mandà na tsy miraharaha izany. Ny toromarika (didy) izay hitantsika ao amin’ny Testamenta Vaovao dia milaza ny dikan’ny hoe mandray ny fahasoavan’Andriamanitra sy mitoky amin’izany ho an’ny olon’Andriamanitra taorian’ny fanorenana ny Fanekena Vaovao.
Inona avy ireo fototry ny fankatoavana?
Aiza àry no ahitantsika ny loharanon’ny fankatoavana? Mipoitra avy amin’ny fiankinan-doha amin’ny fahatokian’Andriamanitra amin’ny tanjon’ny fanekempihavanany izay tanteraka ao amin’i Jesoa Kristy izany. Ny hany endriky ny fankatoavana an’Andriamanitra dia ny fankatoavana ny finoana, izay miseho amin’ny finoana ny faharetan’ny Tsitoha, ny tsy fivadihan’ny teny, ary ny tsy fivadihana amin’ny tena (Romana). 1,5; 16,26). Ny fankatoavana no famaliantsika ny fahasoavany. Tsy namela toerana ho an’ny fisalasalana momba izany i Paoly - izany dia mazava indrindra amin’ny teniny fa ny Isiraelita dia tsy nandao ny fepetra ara-dalàna sasany tao amin’ny Torah, fa noho izy ireo “nandà ny lalan’ny finoana ka nino fa ny fankatoavany no hitarika azy ireo. ento ho amin’ny tanjony » (Romana 9,32; Baiboly vaovao tsara). Ny apostoly Paoly, Fariseo nankatò ny lalàna, dia nahita ny fahamarinana manaitra fa tsy tian’Andriamanitra mihitsy ny hanatanterahany ny fahamarinany amin’ny fitandremana ny lalàna. Raha ampitahaina amin’ny fahamarinana izay sitrak’Andriamanitra homena azy amin’ny alalan’ny fahasoavana, raha ampitahaina amin’ny fandraisany anjara amin’ny fahamarinan’Andriamanitra, izay nomena azy tamin’ny alalan’i Kristy, dia hoheverina ho fahalotoana tsy misy dikany izany ( Filipiana). 3,8- iray).
Nandritra ny taona maro dia sitrapon’Andriamanitra ny hizara ny fahamarinany amin’ny olony ho fanomezana. Nahoana? Satria miantra Izy (Filipiana 3,8-9). Ahoana àry no ahazoantsika izany fanomezana maimaim-poana izany? Amin’ny alalan’ny fitokiana an’Andriamanitra hanao izany sy ny finoana ny teny fikasany hitondra izany amintsika. Ny fankatoavana izay tian’Andriamanitra hampiharintsika dia velomin’ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana Azy. Tsara ireo antso ho amin’ny fankatoavana hita manerana ny soratra masina sy ireo didy hita ao amin’ny fanekempihavanana taloha sy vaovao. Raha mino ny teny fikasan’Andriamanitra isika ary matoky fa ho tanteraka ao amin’i Kristy ary avy eo ao amintsika izany, dia haniry ny hiaina araka izany ho tena marina sy marina. Ny fiainana ao anatin’ny tsy fankatoavana dia tsy mifototra amin’ny fifampitokisana na angamba (mbola) mandà tsy hanaiky izay nampanantenaina azy. Ny fankatoavana avy amin’ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ihany no manome voninahitra an’Andriamanitra; fa io endrika fankatoavana io ihany no manambara ny tena maha-Andriamanitra, izay naseho antsika tao amin’i Jesosy Kristy.
Mbola haneho famindram-po amintsika ny Tsitoha, na manaiky ny fahasoavany isika na mandà izany. Ny fahatsarany dia tsy isalasalana fa hita taratra amin’ny ampahany amin’ny tsy famaliany ny fanoherantsika ny fahasoavany. Amin’izany fomba izany no anehoana ny fahatezeran’Andriamanitra rehefa manohitra ny “tsia” amin’ny “tsia” izy mba hanamafisana ny “eny” nomena antsika amin’ny endrik’i Kristy (2. Korintiana 1,19). Ary ny “tsia” tsitoha dia mandaitra mahery toy ny “eny” nataony satria fanehoana ny “eny” nataony izany.
Tsy fanilihana amin'ny famindram-po!
Zava-dehibe ny mahafantatra fa Andriamanitra dia tsy manilika ny tanjony ambony sy ireo ôrdônansy masina ho an’ny olony. Noho ny tsy fivadihany dia tsy hilavo lefona amintsika izy. Tia antsika tanteraka kosa izy — amin’ny fahatanterahan’ny Zanany. Te hanome voninahitra antsika Andriamanitra mba hatokisantsika sy hitiavantsika azy amin’ny firafitry ny hambom-pon’ny tenantsika rehetra ary hampamirapiratra izany amin’ny fahatanterahana eo amin’ny fomba fiainantsika tohanan’ny fahasoavany. Miaraka amin’izany, ny fontsika tsy mino dia mipetraka any aoriana ary ny fiainantsika dia maneho ny fitokiantsika an’Andriamanitra, izay nomena maimaimpoana amin’ny endriny madio indrindra. Ny fitiavany tonga lafatra kosa dia hanome antsika fitiavana ao anatin’ny fahatanterahana, hanome antsika fanamarinana tanteraka ary amin’ny farany ny voninahitra. “Izay nanomboka ny asa tsara ao anatinareo no hahavita izany koa mandra-pahatongan’ny andron’i Kristy Jesosy.” (Filipianina 1,6).
Hamindra fo amintsika ve Andriamanitra, ary hamela antsika tsy lavorary amin'ny farany? Ahoana kosa raha misy tsy fitoviana amin'ny fitsipika any an-danitra - rehefa tsy ampy finoana eto, tsy fahampian'ny fitiavana eo, kely ny tsy fahatomombanana eto ary kely ny hatezerana sy lolom-po eo, misy lolom-po kely eto ary fahatokisan-tena kely tsy nisy olana? Inona no fepetra ananantsika amin'izany? Salama iray izay mitovitovy amin'izany ihany eto ary ankehitriny fa haharitra mandrakizay! Tena hamindra fo sy tsara fanahy tokoa ve Andriamanitra raha mamela antsika ao anaty «toerany» maika toy izany izy? Tsia! Amin'ny farany, ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy mamela ny fombafomba - na amin'ny fiheverany ny fahasoavana lehibe indrindra, na momba ny fitsipi-pitiavan'Andriamanitra sy ny sitrapony tsara; fa raha tsy izany dia tsy hamindra fo izy.
Inona no azontsika atao hanoherana ireo manararaotra ny fahasoavan'Andriamanitra?
Amin'ny fampianarana ny olona hanaraka an'i Jesoa dia tokony hampianatra azy ireo hahatakatra sy handray ny fahasoavan'Andriamanitra isika fa tsy amin'ny maha-diso sy manambony tena. Tokony hanampy azy ireo miaina amin'ny fahasoavana entin'izy ireo eto isika sy ankehitriny. Tokony hampahatsapa azy ireo isika fa na inona na inona ataony, ny Tsitoha dia ho marina amin'ny tenany sy ny tanjon'izy ireo. Tokony hampatanjaka azy ireo isika amin'ny fahalalana fa Andriamanitra, mahatsiaro ny fitiavany azy ireo, ny fangoraham-pony, ny toetra ary ny tanjony manokana, dia tsy hitranga amin'ny fanoherana ny fahasoavany. Ho vokany, indray andro any isika rehetra dia handray anjara feno amin'ny fahasoavana ary hiaina fiainana famindram-po. Amin'izany fomba izany, handray am-pifaliana ireo «adidy mifandraika amin'izany isika - mahafantatra tanteraka ny tombontsoa hoe zanak 'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, zokinay.